Manohy ny sidina US, Italia, Belzika, Bulgaria, Jordania, Irlandy, Sipra, ary avaratra Makedonia i Russia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Manohy ny sidina US, Italia, Belzika, Bulgaria, Jordania, Irlandy, Sipra, ary avaratra Makedonia i Russia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Mandritra izany fotoana izany, ny mpitatitra rosiana dia tsy maika ny mindrana am-pahavitrihana ireo quota nomena.
Midika io fanapahan-kevitry ny foibe io fa afaka manohy ny sidina mankany amin'ireo firenena ireo ny kaompaniam-pitaterana rosiana.
Nanambara ny seranam-piaramanidina rosiana fa vonona hanohy ny sidina mankany Italia, Bulgaria, ary Sipra ihany izy ireo.
Ny sidina eo anelanelan'i Russia sy ireo firenena ireo dia naato tamin'ny taona 2020 teo afovoan'ny areti-mandringana COVID-19.
Nanambara ny manampahefana rosiana androany fa hatramin'ny 28 jona, dia nanohy ara-dalàna ny fifamoivoizana an'habakabaka niaraka tamin'i Etazonia, Italia, Belzika, Bulgaria, Jordania, Irlandy, Sipra, ary Makedonia Avaratra i Russia.
Ny fanapaha-kevitra hanohizana ny sidina dia nataon'ny foibe miasa ho an'ny ady amin'ny coronavirus tamin'ny 18 jona.
Midika ity fanapahan-kevitry ny foibe ity fa afaka manohy ny sidina mankany amin'ireo firenena ireo ny zotram-piaramanidina. Amin'izao fotoana izao dia nanambara ny kaompaniam-pitaterana rosiana fa vonona hanohy ny sidina ihany izy ireo mankany Italia, Bulgaria, ary Sipra ihany.
Nanaiky ny masoivoho miasa fa hanokatra sidina avy any Moskoa mankany Washington sy New York indroa isan-kerinandro (izany hoe samy afaka mitondra sidina roa avy ny mpitatitra rosiana sy ilay vahiny). Sidina avy any Moskoa mankany Bruxelles (inefatra isan-kerinandro), avy any Moskoa mankany Dublin (sidina roa), avy any Moskoa mankany Roma sy Milan (sidina roa), avy any Moskoa mankany Venice sy Naples (sidina efatra), avy any Moskoa mankany Larnaca (sidina efatra ), avy any Moskoa mankany Paphos (sidina telo).
Nankatoavin'ny manampahefana ihany koa ny famerenana ny sidina misy eo amin'i Russia sy Bulgaria: Sofia, Varna, Burgas dia misokatra ho an'ny sidina na avy any Mosko na avy amin'ireo faritra (avy any Mosko - sidina efatra isan-kerinandro, avy amin'ny faritra - iray).
Mandritra izany fotoana izany, ny mpitatitra rosiana dia tsy maika ny mindrana am-pahavitrihana ireo quota nomena. Amin'izao fotoana izao, Aeroflot nanambara ny fikasana hanokatra sidina avy any Moskoa mankany Sofia sy Burgas amin'ny volana jolay, kasaina hampiasana sidina efatra isan-kerinandro izy.
Ary koa, nanaiky ny hampiakatra ny sidina mankany Vienna, Azerbaijan, Yerevan, Qatar, Belgrade, Helsinki, Zurich, ny foiben'ny asa. Misokatra amin'ny sidina ihany koa ny Split, Dubrovnik, Pula, Geneva. Ny lehibe indrindra, ny quota ho an'ny sidina mankany Gresy dia nitarina. Ankoatry ny fampitomboana ny fahamaroan'ny sidina avy any Moskoa mankany Atena, ny birao dia nanokatra sidina avy any Mosko sy ny faritra mankany Tesalonika, Heraklion, Corfu, ary Rhodes.